Hagaha Dalxiiska ee Praslin ayaa Walaaca Cusub la Wadaaga Wasiirka Dalxiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Hagaha Dalxiiska ee Praslin ayaa Walaaca Cusub la Wadaaga Wasiirka Dalxiiska
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Hagaha dalxiiska ee Praslin ayaa la kulmay Wasiirka Dalxiiska
Ka qaadista xayiraadaha socdaalka ee dawladaha shisheeye, la'aanta suuq -geynta suuq -geynta, hoos -u -dhigidda hababka khiyaanada iyo anshaxa, iyo baahida loo qabo in la hirgeliyo heerarka warshadaha ee ugu yar ayaa ka soo qayb galay doodda uu qabtay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska, Mr. Sylvestre Radegonde, oo leh hageyaal dalxiis oo ka socda Praslin kulan gaaban oo lagu qabtay Vallée de Mai Jimcihii, Sebtember 24, 2021.
Wasiirka ayaa la wadaagay inay ka shaqeynayaan sidii Seychelles ay u noqon lahayd mid ay heli karaan dadka soo booqda, gaar ahaan kuwa ka yimaada galbeedka Yurub.
Dowladda ayaa ka shaqeyneysa sidii ay u hubin lahayd in Seychelles ay u hoggaansanto shuruudaha caafimaadka iyo hababka warbixinta iyo in laga saaro liisaska aan safarka ahayn.
Waxa la filayo ayaa ah in tirada dadka soo booqda ay kor u kici doonto iyadoo duulimaadyada ay dib u bilaabayaan wada -hawlgalayaasha shirkaddu.
Kulanka lala yeeshay hageyaasha dalxiiska ee Praslin, oo ay ka soo qeybgaleen Xoghayaha Guud ee Dalxiiska, Marwo Sherin Francis, iyo Agaasimaha Guud ee Qorsheynta Waxsoosaarka iyo Horumarinta, Paul Lebon, ayaa lagu qabtay goob joog ka ahaa xubin ka tirsan Golaha Qaranka ee Praslin, Mudane Churchill Gill iyo mudane Wavel Woodcock, Guddoomiyaha Ururka Ganacsiga Praslin, Mr. Christopher Gill iyo sidoo kale wakiilo ka socda Mu’asasada Jasiiradda Seychelles (SIF), Booliska Seychelles iyo Hay’ada Shatilaynta Seychelles (SLA).
Khudbadiisii ​​furitaanka Wasiirka Radegonde wuxuu ka hadlay xayiraadaha socda ee ka imanaya suuqyada dhaqanka ee Seychelles, wuxuu caddeeyay in labada waaxood ee hoos yimaada uu si firfircoon ula shaqeynayo dowladaha shisheeye iyo sidoo kale la -hawlgalayaasha warshadaha si loo hubiyo in Seychelles ay noqoto mid ay heli karaan booqdayaasha, gaar ahaan kuwa ka socda galbeedka Yurub.
“Waxaan la shaqeyneynaa saaxiibadeenna shisheeye si aan taas u hubinno Seychelles waa mid u hoggaansan shuruudahooda ku saabsan hababka caafimaadka iyo warbixinta iyo in laga saaro liisaskooda aan safarka ahayn. Waxa kale oo aan filaynaa in tirooyinka (booqdayaasha) ay kor u kici doonaan iyada oo ay dib u bilaabanayaan duulimaadyadii ay wada -hawlgalayaasha diyaaraduhu ka iman jireen goobaha dhaqankeenna sida Condor iyo Air France bishii Oktoobar, ”ayuu yidhi Wasiir Radegonde.
Kulanka oo ujeedadiisu ahayd sidii wax looga qaban lahaa cabashooyinka ay soo jeediyeen SIF iyo SLA oo wakiiladoodu ku nuuxnuuxsadeen in xaaladda Vallée de Mai ay noqotay mid ay adag tahay in la maareeyo loona baahan yahay tallaabo degdeg ah si wax looga qabto dhaqammada ganacsi ee su’aasha leh ee qaar ka mid ah hagayaasha dalxiiska ee wax u dhimaya hawlgallada Vallée de Mai.
Tilmaamayaasha dalxiiska ayaa sheegay inay isku raacsan yihiin in ilaa xad aan la isku waafaqsanayn ganacsigooda, qurxinta la'aan, anshaxa iyo wadashaqaynta ayaa sawir xun siinaysa warshadaha martida.
Wasiir Radegonde wuxuu ku taliyay in dhammaan hay'adaha ay iska kaashadaan dib-u-eegista siyaasadaha ay ku shaqeeyaan hagaha dalxiisku, isagoo ku wargelinaya ka-qaybgalayaasha in Waaxdu ay qabanqaabin doonto fadhiyo adeeg oo loogu talagalay hagaajinta heerarka warshadaha ee dhammaan guddiga, oo ay ku jiraan kuwa diiradda saaraya hagaajinta iyo hagaajinta ku saabsan adeegyada la siiyo martida.
Arrinta tartan aan caddaalad ahayn oo lala yeesho hageyaasha dalxiiska ee ku saleysan Mahé oo iibiya safarrada iyo socdaallada maalinlaha ah ee Praslin ayaa lagu soo qaaday hageyaasha dalxiiska ee jasiiradda Praslin oo iftiiminaya inay ka maqan yihiin fursadihii hore u yaraa ee nolol maalmeedka dalxiiska.
Wakiilka SIF wuxuu caddeeyay in booqdayaasha noocaan ah aysan wax qiimo ah ama dakhli ah ku soo kordhinayn goobta Dhaxalka Adduunka ee UNESCO maadaama badankoodu aysan soo gelin goobta, iyagoo doorbidaya inay sawirro ku qaadaan waddada dhinaceeda, laakiin si kastaba ha ahaatee waxay adeegsadaan tas -hiilaadka beerta, mar walba oo khatar ku ah amniga dadka kale ee isticmaala waddooyinka, SIF ayaa tilmaantay. Arrimahan iyo kuwo kale ayaa loo gudbin doonaa mas'uuliyiinta ay quseyso, ayuu yiri Wasiir Radegonde.
Isaga oo ka jawaabaya walaaca hagayaasha dalxiiska ee ku saabsan la'aanta fursadaha suuq -geynta oo ay siiyaan hoteellada maxalliga ah, PS Francis wuxuu caddeeyay in Waaxda Dalxiisku ay diyaarisay goob lagu caawiyo hawl -wadeennada dalxiiska si kor loogu qaado badeecadooda iyo adeegyadooda.
”Waan ognahay oo waan fahamsanahay doorka muhiimka ah ee suuqgeynta oo qayb ka ah guusha warshadaha; sidaa darteed, waxaan ku leenahay koox gacanta ku haysa kor u qaadista meesha aan u socono. Waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaad iska diiwaangelisaan aaladdayada ParrAPI taasoo iyaduna kordhin doonta muuqaalkaaga. Waxaan sidoo kale ku dhiirri -gelin doonaa dhammaantiin xaadirkan inay maalgashadaan suuq -geynta idinka, gaar ahaan baraha bulshada maadaama ay hadda tahay halka macmiilku joogo, ”ayay tiri Mrs. Francis.
Ku -biiridda si loo riixo hal jiho ayaa gacan ka geysan doonta hagaajinta heerarka warshadaha Wasiirka Radegonde ayaa yiri, isagoo ku dhiirri -gelinaya hagayaasha socdaalka ee Praslin inay sameystaan ​​urur si ay danahooda iyo tan warshadaha u sii wataan. Wasiir Radegonde oo kulanka soo xidhay taageerada warshadaha dalxiiska on Praslin, isaga oo ku celinaya digniintiisa in Waaxda Dalxiiska iyo la -hawlgalayaasheeda kale ay ku adkaan doonaan hawl -wadeennada ku adkeysanaya ku -dhaqanka khiyaanooyinka oo loo arko inay khatar ku yihiin warshadaha.